भक्तपुरबाट कटुवा पेस्तोलसहित १ जना प्रहरी नियन्त्रणमा – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २४ भाद्र मंगलवार १९:२४
भक्तपुरबाट कटुवा पेस्तोलसहित १ जना प्रहरी नियन्त्रणमा
एजेन्सी, भक्तपुर। सोमबार भक्तपुर सुर्यविनायक नगरपालिका वडा न.९ भातेढिकुरमा बाटोमा हिँड्डै गरेको अवस्थामा एकजना ब्यक्तिलाई शंकाको आधारमा चेकजाँच गर्दा पेस्तोल फेला परेको छ । बारा जिल्ला फेटा गाउँपालिका वडा न. ३ घर भएका बर्ष ३८ का शम्भु प्रसाद साह कानुलाई महानगीय प्रहरी वृत जागातीका प्रमुख प्र.ना.उ. चक्रराज जोशी सहितको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेको साहको साथबाट ६ राउण्ड गोलीसहित एक थान कटुवा पेस्तोल बरामद गरिएको छ । थप अनुसन्धानको लागि निजलाई जागाती वृतमा राखिएको छ । साहलाई हातहतियार तथा खरखजना सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरी अनुसन्धाका कार्य भइरहेको महानगरीय प्रहरी वृत जागातीमा राखिएको सूचना अधिकृत प्र.ना.उ. रेवती समण पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
– रामगोपाल तमखु
PREVIOUS Previous post: गण्डकी प्रदेशको भ्रष्टाचार तथ्याङ्क : तेस्रो नम्बरमा ‘तनहुँ’
NEXT Next post: नेपाल पर्यटन बोर्डको डेढ अर्ब बढी बजेट भ्रमण वर्षलाई लक्षित